Concrete Aerated Precast, Mametaka AAC Aluminium, vovoka AAC Aluminium - Teng'an
Fametahana aliminioma ho an'ny beton aerated
Suqian Teng'an New Building Material Co., Ltd. dia orinasa maoderina manokana amin'ny famokarana sy ny varotra paty vovoka aluminium. Izy io dia manana fitaovana famokarana kilasy voalohany sy fitaovana fanandramana mandroso, miaraka amin'ny teknolojia famokarana siantifika sy fanavaozana ary hery ara-teknika matanjaka hamoronana indostrian'ny paty aluminium vita amin'ny orinasa malaza.
Ny fampiharana ny fitsipiky ny vovo-aluminium ...
Drafitra famokarana vovoka aluminium
Torolàlana momba ny fitehirizana sy ny fampiasana ny vokatra
Momba ny akora
Ny haben'ny fampiharana ny aluminium vita amin'ny hydrated ...
Mampiavaka ny paty vovo-aluminium
Suqian Teng'an New Building Material Co., Ltd. dia orinasa maoderina manokana amin'ny famokarana sy ny varotra paty vovoka aluminium. Manana fitaovana famokarana kilasy voalohany sy fitaovana fanandramana mandroso ...
Fampiasana sy fenitra manara-penitra ny vovo-aluminium vita amin'ny rivotra
Betsaka ny fanasokajiana ny vovo-aluminium alimika. Ny karazany samy hafa dia samy manana ny refiny misy azy ary samy hafa be ny fampiasana azy sy ny fahombiazany. Ny vovo-dronono vita amin'ny alimina dia tokony hampiasaina amin'ny tanjona manokana, noho izany dia mitaky kalitao henjana izy io. Ny hetsika ...
Fomba fiasa mangatsiaka hanamboarana paty vovoka aliminioma sy ny fitehirizana azy
Ny paty vovoka aluminium dia karazana akora simika, izay efa be mpampiasa amin'ny indostria mifandraika ary nandray anjara lehibe. Ny vovo-aluminium dia manana fepetra takiana amin'ny fizotrany mandritra ny fizotry ny famokarana, mazàna mampiasa fomba mekanika sy asa mangatsiaka ...
032019 / Jona
Ny endrik'ireo pigmentan'ny aliminioma sy ny fomba fanodinana vovoka aluminium
Amin'ny maha fitaovana akora indostrialy azy dia ampiasaina betsaka amin'ny indostria maoderina ny vovo-aluminium, ary mila ampiharina ireo indostria toy ny akora fanafana, alikaola vita amin'ny seramika ary metalyurgie simika. Noho ny fahasamihafana amin'ny fizotry ny famokarana, ny fisehoana eo ambanin'ny electron m ...
Suqian Teng'an New Building Material Co., Ltd. (taloha Huai'an Jiayi Building Material Co., Ltd.)